८ कक्षामा पढ्ने प्रकृतिको अक्षर टाइप गरेको भन्दा नि राम्रो ! - Arghakhanchi Saptahik
८ कक्षामा पढ्ने प्रकृतिको अक्षर टाइप गरेको भन्दा नि राम्रो !
काठमाडौं, भदौ २६ - भक्तपुरको सैनिक आवासीय महाविद्यालयमा कक्षा ८ मा पढ्ने प्रकृति मल्ल कम्प्युटरमा टाइप गरेको भन्दा पनि राम्रो अक्षर लेख्छिन् । उनले लेखेको अक्षर हेर्ने सबैले भन्छन् – ‘वाह, कस्तो जादू, कसरी लेख्न सकेको होला यसरी !’ हुन पनि उनले लेखेको अक्षर टाइप गरेको भन्दा कमको देखिँदैन ।
केरमेट नगरीकन सररर मिलाएर लेख्न सक्ने उनको कला देखेर विद्यालयका शिक्षक र साथीहरु पनि अचम्म मान्छन् । ‘उनी सानैदेखि राम्रो लेख्छिन्, उनको अक्षर देख्दा हामी पनि चकित पर्छौं’ विद्यालयका अतिरिक्त क्रियाकलाप प्रमुख जितबहादुर कुँवरले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो । सबैलाई
चकित बनाएर अक्षर कोर्न सक्ने प्रकृतिको घर धनकुटा हो । अहिले उनी भक्तपुरमै बस्छिन् र सैनिक आवासीय विद्यालयमा पढ्छिन् । काठमाडौं उपत्यकाका
विद्यार्थीहरुबिच आयोजना गरिएको हस्तलेखन प्रतियोगितामा उनी पनि सहभागी भएकी छिन् । प्रतियोगितामा उपत्यकाका ४ हजार विद्यार्थीले भाग लिएका छन् । सबैलाई उछिनेर प्रथम हुने प्रकृतिको लक्ष्य छ । नतिजा आउँदो ३० गते सार्वजनिक हुनेछ ।
तर सबै विद्यार्थीले राम्रो लेख्न सक्दैनन् । राम्रो अक्षर लेख्न सक्नु पनि एउटा कला हो । विद्यार्थीलाई राम्रो लेख्नको लागि हौसला दिन एडुटेक एकेडेमी सोलुसन भन्ने संस्थाले बेलाबेला यस्तो प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरेको छ ।
‘काठमाडौं उपत्यकाका विद्यार्थीलाई सहभागी
गराएर हामीले यसअघि पनि यस्तो प्रतियोगिता गराएका छौं’ संस्थाका कृष्णप्रसाद दुवाडीले भन्नुभयो, ‘विद्यार्थीलाई हौसला दिनको लागि यस्ताखाले
प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिनेछौं ।’